Sweatshirts clothing Dharka xayeysiinta ah • Xirfadlaha kombiyuutarka ee P&M xirfadaysan
Sweatshirts, albaabka midig ee xiga surwaal i Funaanado, waa asaaska aasaasiga ah ee dharka shaqaalaha ee warshado badan. Iyagu waa sidoo kale shirkad weyn oo xayeysiin u sameysa shirkad, naadi ama dhacdo, maxaa yeelay maahan oo keliya astaan, laakiin sidoo kale midabka dharka, waxaa lagu gartaa sumadda. Sweatshirts kuwaas oo bixiya diirimaad, u oggolaanaya xorriyadda dhaqdhaqaaqa ka wanaagsan jaakad, oo waliba ilaaliya dharka gaarka loo leeyahay.
Sweatshirts - moodada ayaa la socota gacanta raaxada
Inaga dukaan waxaad ka heli doontaa xulasho balaaran oo ah macmacaanka xayeysiinta ujeedooyin kala duwan. Moodooyinka aan soo bandhigno waxay ka kooban yihiin qalab tayo sare leh oo dammaanad qaadaya nolol wax soo saar dheer.
Thanks to hantidooda, dhididka ayaa sifiican u ilaaliya jirka xaaladaha cimilada kala duwan. Noocyada kala duwan ayaa u oggolaanaya iyaga in loo isticmaalo xilli kasta sanadka oo dhan. Waxay kuxirantahay cimilada ama xaaladaha shaqada, waxaad ka dooran kartaa noocyada xagaaga diiran, jiilaalka iyo kuwa khafiifka ah, iyo sidoo kale guga iyo dayrta waxyar oo dahaaran.
Raaxo iyo wax qabad
Waxaan si fiican u ognahay in macaamiisheenna ay leeyihiin baahi wax gadasho oo kaladuwan ah oo aan ka imaanayn keliya xaaladaha shaqada, laakiin sidoo kale xulashooyinka shaqsiyadeed. Annaga oo tan ogaannay, waxaan hubinay in dhididyada macmacaanka ee lagu bixiyo kala-soociddeenna ay leeyihiin astaamo kahortaga wasakhda, ka diga iyo ka-hortagga walxaha kiimikada ee waxyeelada leh.
Raaxo, oo ay weheliso hawl qabad, sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Taasi waa sababta moodooyinka badan ay u qalabeysan yihiin faashad lugaha leh iyo dhexda si ay u hubiyaan ugu yaraan kuleylka jirka iyo ka ilaalin dharka shaqaalaha gaarka ah dhaawaca iyo wasakhda. Qaar ka mid ah dhididka ayaa leh shay gaar ah oo kordhiya iska caabbinta farsamada ee agabyada meelaha ugu badan waxyeelada u sabab ah isticmaalka badan (tusaale ahaan xusullada).
Shakhsi u ahaanshaha sharaf weyn
Shirkado badan ayaa qadariyo shaqsi ahaaneed iyo shaqsi ahaaneed, gaar ahaan haddii shaqaaluhu door door wakiilnimo ka ciyaaraan xiriirada lala yeelan karo qandaraasleyaasha iyo macaamiisha. Raacitaanka hogaankan, waxaa mudan in la doorto qaab summad tayo sare leh oo adkaysiga u leh waxyeelada, baabi'inta iyo dhaqitaanka heerkulka sare. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa shaqsiyad wanaagsan oo qurux badan daabacaadda kumbuyuutarka.
Dharka kumbuyuutarka ee dharka
Sababtaas awgeed ayaa ah in dharka daabacan ay yihiin shey caan ah oo dharka loogu talagalay noocyada kala duwan ee munaasabadaha bannaanka, taagan wakiillada, shirarka iyo tababarka. Dharka midabbada shirkadda ama naadiga leh shaqsiyad shaqsiyeed ayaa saameyn togan ku leh summada sumadda waxayna sare u qaadaysaa sharafteeda.
Waxaan bixinaa dhidid ka kooban shirkadaha sida Reis, Leber & Hollman, Stedman, LH-Scot iyo Adler. Iibinta waxaa ka mid ah: dhogorta, blouses-yada shaqada, jaakadaha polypropylene, digniinta blouses, funaanado.
Annagu waxaan kuu adeegsan karnaa xulashada iyo shaqsi ahaaneed ee badeecooyinka. Waxaan leenahay garoon mashiin sareeya oo na siiya shaqo hufan iyo tayo sare u leh macaamiisheena. Moodooyinka oo dhan ayaa laga iibsan karaa dukaankayaga internetka www.pm.com.pl ama dukaankeena ku yaal Allegro "PRODUCER-BHP". Hadaad rabto inaad aragto tusaalayaasha xijaabka, fadlan booqo tab ku saabsan firmie.
dhidid macaandhidid leh xarig gashadedhidid leh astaandhidid badan oo leh milkiilayaashadhidid aan lahayn xardhonabarada amnigadhididka dadka firfircoonmacmacaanka shaqadamacmacaanka dugsigadhididka shirkadadhididka xilliga dayrtadhididka xagaagaxayeysiinta dhididkahiwaayadaha xayeysiinta doonyahaxayeysiinta dhididka warsawxayawaannada xayeysiiska ahdhidid aan caadi ahayndhididka gugadhidid macaandhididyo leh jeebadomacmacaanka oo daabacandhididka xilliga qaboobahadhididka haweenkadhididka raggadhididka xayeysiiska ugu fiicandharka caafimaadka iyo amnigadharka shaqaalahadharka xayeysiintaDharka Shaqaalahadhididka ciyaarahadhididka xayeysiinta ee jaban